SENTO, VAHININ'NY PÔETAWEBS
Ny abidia no niandohan'ny teny. Ny teny no niandohan'ny fehezanteny. Ny fehezanteny voarafitra no mitambatra anatin'ny tononkalo. Ary ny tononkalo nitambatra no manome ny "MASOARIVO", izay hetsika hianohana ny kanto malagasy amin'ny 27 Mey izao. Fomba fijery ety ivelany izay fa eo i Sento haneho ny heviny momba izany voambolana izany. Mandray an'i Sento eto amin'ny tapatapakahitra ny Poetawebs. I Doda Razafindravelo no mitafatafa aminy.
Miarahaba anao Sento ary misaotra anao mivahiny eto aminay.
Salama tompoko! Ianareo ato amin'ny Poetawebs no isaorana amin'ny fampiantranoana.
Azo fantarina ve hoe iza marina ianao Sento?
Sento dia anarana nindramina teo amin'ny fiaraha-monina hiaina ny fisiana feno alahelo, fiainana, fitiavana, solom-bavan'ny mponina amin'ny alalan'ny soratra, hilazana ny fisiana sy ny tsy hay andavanandro.
Izany hoe ireo voatanisa ireo ve izany no tena hita anatin'ny kantonao? Ny tiako ambara hoe mivoy ny jaly eny anivon'ny fiaraha-monina ihany ve ianao sa misy tara-kevitra hafa?
Eny! Misy kanto hafa ka, ny fiainana rehetra. Fa ireo aloha hatreto no tena hoe tsara fivoy sy nanamarika an'ilay hoe Sento... Fa tsy nipetraka amin'ireo ihany.
Toa efa nivahiny teto amin'ny tapatapakahitra ianao e? Azo atamberina kely ve mialohan'ny hidirantsika amin'ny hetsika ho atao?
Eny! Tamin'ny hetsika antsa sy famoaham-boky Anoka Fitia izay notanterahanay sy Rkf tao amin'ny Ivokolo Cemdlac Analakely ny 03 febroary 2016 lasa teo.
Seho faharoa ahitana anao izany i "Masoarivo". Hafa kely ilay lohateny, inona no tena dikany Sento?
Masoarivo dia "tamis" amin'ny fiteny vahiny, fa nogasiana hoe: sivana, ary nadikanay ihany koa hoe Masoarivo, entina hilazana sy hakana ohatra ny fiainana feno sivana. Masoarivo: fijerim-piainana maro no tena havoitra ao anatiny, hafatra an-kalo mitanisa ny fiainan'ny zanak'olombelona.
Misy fahadisoana ny fiheverako ny "Masoarivo" teny amboalohany. Taratra amin'ny lohateny Sento ny hakanton'ny hetsika. Hisy boky hamidy ve?
Ao isika mahita AZY angamba e! Hihi! Ny boky mety nisy ihany saingy nisy ny olana dia tsy vita amin'io andro io fa ao aoriana kely. Roa mianadahy izahay sisa no ao anaty Masoarivo raha dimy teny am-piandohana, noho ny antony tsy mazava, iniako tenenina mihitsy.
Dia iza avy no hamelona azy?
Maromaro ihany ireo namana hamelona izay noezahanay ho vaovao amin'ny endriky ny mpankafy antsa hatramin'izay mihitsy ny sasany. Tanjona ihany koa ny hoe misy mpanoratra miafina any ambadika any fa tsy misy mahita, dia amin'io izy no hiseho ho hitantsika eo: Harilala Lapin, Ny Vazonay, Ravo, Jafan, Tikalo Tsisatry, Rajo Niaina, Fotopisaina RaOly, miaraka amiko sy Tojo Ny Fanantenana.
Haka endrika vaovao ihany koa ve izany ny seho? Hisy fizarana firy? Inona no hampiavaka azy amin'ireo seho rehetra efa nisy?
Misy ihany ny endriny vaovao na ny antsa na ny haingon-tsehatra avy amin'ny alalan'ny mpiantsa tsirairay. Noezahina natao fizarana telo ity hetsika ity ary hisy lohahevitra isaky ny fizarana.
Fizarana voalohany: "Teny sy fiainana"
Fizarana faharoa: "Sangodim-pitia"
Fizarana fahatelo: "Avelo mitia".
Ireo no ho voaboasana amin'ny alalan'ny antsan'ny tsirairay izay ezahina ho tantara mitohy ny fizotrany fa tsy hisy hanelingelina amin'ny hira ohatra.
Antsa sa tsangan-tononkalo no hiseho?
Antsa no hatao, ary ezahina ho pôezia pôetika fa tsy lira pôetika.
Ny mampiavaka azy angamba tsy dia hita loatra, fa ny tanjon'i Sento dia hoe hamoaka ireo "Mpanoratra miafina" tsy misy mpahita any ananonanona any, saingy be mpankafy ihany fa tsy misy mahita...
Dia eo ihany koa ny fizotran'ny antsa izay haseho amin'ny endriny hafa kokoa noho ny efa nisy hatrizay.
Tsara hampahatsiahivinao ihany angamba Sento ny ora sy fotoana ary ny toerana hanaovana an'i "Masoarivo".
Masoarivo: ny 27 mey 2016 ho avy izao, manomboka amin'ny 2ora sy sasany ao amin'ny Ivokolo Cemdlac Analakely. Tsy misy vidim-pidirana fa tongava maro, ny boky ialana tsiny mialoha fa nisy olana dia voatery najanona, saingy mampanantena anareo izahay fa ny antsa no hezahinay. HAPOAKA ny efi-trano, hihi!
Mila anao tsy saro-tahotra fotsiny amin'io fa hisy fiovana ny endriky ny efitra sy ny lampihazo. Aza dia taitai-po fa mitonia tsara, hihi!
Misy hafatra tianao hampitaina amin'ny mpanaraka ny "Poetawebs" sy ny mpankafy kanto malagasy ve?
Hafatra: ankafizo ny kantontsika e! Indrindra ny "Teny Malagasy". Mazotoa mamaky boky, indrindra ny tononkalo sy tantara fa ampy hanampy antsika sy ho fiombonana amin'ny "Fanandratana ny Literatiora Malagasy" izany na am-bava na an-tsoratra.
"Dia hifameno isika, anaty pôezia".
Mankasitraka anao Sento nivahiny teto amin'ny Pôetawebs, dia mirary ny hahatontosana soa an'i "Masoarivo"!
Mankasitraka anao nampiantrano. Telina indrindra! Misaotra ny "Pôetawebs nampivahiny.